တရုတ် ၁၀၀% ကာဗွန်ဖိုင်ဘာအဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းကယ်ဆယ်ရေးလုပ်သားများနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ | Lanbao
၁၀၀% ကာဗွန်ဖိုင်ဘာလှံတံသည်မြင့်မားသောစွမ်းအားရှိပြီးချေးယူရန်မလွယ်ကူပါ။ ပုံပျက်ရန်မလွယ်ကူပါ။ ဒါဟာကယ်ဆယ်ရေးထမ်းဘိုးများအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ဘက်စုံသုံးရေကယ်ဆယ်ရေးတယ်လီစကုပ်လှံတံကိုပင်လယ်ဘေးရန်၊ တိရိစ္ဆာန်ကယ်ဆယ်ရေး၊ ရေကြီးမှု၊ မြင့်မားသောကယ်ဆယ်ရေးစသည်တို့အတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးသော့ခတ်ဖြင့်ကယ်ဆယ်ရေးလှံတံ၏အရှည်ကိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ညှိနိုင်သည်။ ။
လူမီနီယမ်အဆုံး ဦး ထုပ်
ခိုင်ခံ့။ ၀ တ်ဆင်နိုင်သောကာဗွန်ပြွန်ကိုမျက်ရည်ယိုခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုဂျာမနီ၊ ဂျပန်၊ အမေရိကန်၊ သြစတြေးလျ၊ ကနေဒါနှင့်အခြားကမ္ဘာ့စျေးကွက်များနှင့်ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပရှိလူသိများသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသို့ကောင်းမွန်သောတည်ငြိမ်သောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆက်ဆံရေးထူထောင်ရန်၊
ဂျပန်၊ အမေရိကန် / ကိုရီးယားမှအရည်အသွေးမြင့်ကာဗွန်ဖိုင်ဘာထည်
နာမည် 100% ကာဗွန်ဖိုင်ဘာတယ်လီစကုပ်တိုင်ဘက်ပေါင်းစုံတိုင်ဝင်ရိုးစွန်း
ပစ္စည်းအင်္ဂါရပ် ၁။ ဂျပန်မှ epoxy ဗဓေလသစ်ဖြင့်တင်သွင်းသောမြင့်မားသောမော်ဂျူး ၁၀၀% ကာဗွန်ဖိုင်ဘာဖြင့်ပြုလုပ်သည်
၃။ သံမဏိကိုယ်ထည်၏ ၁/၅ နှင့်သံမဏိထက် ၅ ဆပိုသည်
4. အပူတိုးချဲ့၏အနိမ့်ကိန်း, မြင့်မားသောအပူချိန်ခံနိုင်ရည်
5. ကောင်းမွန်သောတည်ငြိမ်မှု၊ ကောင်းမွန်သောကြံ့ခိုင်မှု၊ အပူတိုးချဲ့မှုနည်းပါးခြင်း
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် ပုံစံ Twill, ရိုးရိုး
မျက်နှာပြင် တောက်ပ, Matte
လိုင်း 3K ဒါမှမဟုတ် 1K, 1.5K, 6K
အရောင် အနက်ရောင်၊ ရွှေ၊ ငွေရောင်၊ အနီရောင်၊ ဘူဂူရီ (Gree) (သို့မဟုတ်ရောင်စုံပိုးထည်)
ပစ္စည်း Japan Toray Carbon Fiber ထည် + အစေး
အရွယ်အစား အမျိုးအစား ID နံရံအထူ အရှည်
တယ်လီစကုပ်တိုင် 6-60 မီလီမီတာ 0.5,0.75,1 / 1.5,2,3,4 မီလီမီတာ 10Ft-72ft
လျှောက်လွှာ ၁။ Aerospace, Helicopters Model Drone, UAV, FPV, RC Model အစိတ်အပိုင်းများ
၂။ သန့်ရှင်းရေးကိရိယာ၊ အိမ်သုံးသန့်ရှင်းရေး၊ အဝေးထိန်း၊ ကင်မရာတိုင်၊
ထုပ်ပိုး အကာအကွယ်အလွှာ ၃ ခု - ပလပ်စတစ်ဖလင်၊ ပူဖောင်းအဖုံး၊
(ပုံမှန်အရွယ်အစား: 0.1 * 0.1 * 1 မီတာ (အကျယ် * အမြင့် * အရှည်)
ရှေ့သို့ 50FT အဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းအဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းသုံးရေကယ်ကယ်ဆယ်ရေးတိုင်များ
နောက်တစ်ခု: ရေကယ်ဆယ်ရေးဝင်ရိုးစွန်းအတွက်ကောင်းသော Tenacity တယ်လီစကုပ်မှန်ဘီလူးထမ်းဘိုး
အိတ်ဆောင်ရေတယ်လီစကုပ်မှန်ဘီလူး ၁၂ မီတာ ၃ ကီလိုမီတာ။
20m ကာဗွန်ဖိုင်ဘာနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး panel ကိုတိုင်ရှင်းလင်း ... \_ t
၄၅ ပေတိုင်ပါ ၀ င်သည့်တိုင်မီးတိုင်အားသန့်ရှင်းစေသောရေတပ်ဆင်ထားသောကား ...
၂၅ ပေ ၂၀ မီတာတိုးချဲ့ကာ Carbon Fiber Window Cleaning ...